2017 May 15 | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
DAAWO: Abwaanada Somaliland oo goor dhaw ku dhawaaqay arrin ku saabsan PL, Daahana ka rogay Xaqiiqada…..
BURCO(P-TIMES)- Abwaan Sooraan oo si weyn looga yaqaano ayaa amaan iyo bogaadin kala dul-dhacay dawladda Puntland & Shacabka, sidii ay soo dhaweeyeen Dadkii reer Puntland ee u hayaamay xiligii ay roobabku curteen. Abwaanka ayaa sheegay in ay siweyn amaan iyo bogaadin ugu hayaan Shacabka Puntland, waxaana uu cadeeyey in ay Shacabka Somaliland ay arrintaas abaal […]
DEG DEG: M/weynaha Soomaaliya oo magacaabay Agaasime kuxigeenka Madaxtooyada Soomaaliya, Yuuse bedelayaa?
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa magacaabay Agaasime kuxigeenka Guud ee Madaxtooyada, kaasoo ka mid noqonaya Agaasime kuxigeenada Madaxtooyada. Agaasime kuxigeenka xilka loo magacaabay ayaa lagu magacaabaa C/llaahi Aadan Kulane, inkastoo aan si rasmi ah u helin qeybta uu qaabilsanaan doono, hadana Madaxtooyada ayaa xilliyadii hore laheyd labo agaasime kuxigeen. Magacaabista Agaasime kuxigeenka labaad ee […]
SAWIRRO: Xuska Maalinta Dhalinyaradda SYL oo lagu qabtay Garoowe
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweyne kuxigeenka dawladda Puntland Eng CabdiXakiim Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey ayaa ka qeybgalay xuska maalinta Dhalinyaradda SYL oo lagu qabtay magaalada Garoowe, ayna soo qabanqaabiyeen Hay,addaha World Vision, Mercy Crop, Dhalinyaro, Kooxo ka socda Fanka iyo Suugaanta iyo Marti sharaf kale. Guddoomiyaha dallada ayku midaysan yihiin ururrada dhalinyarada Puntland ee Pyan Aweys Axmed Sardheeye […]
FALANQEYN XASAASI AH: Safarka M/weyne Farmaajo ee Masar, muxuu daaran yahay? Maxaase ka soo bixi doona?
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Max’ed Cabdllaahi Farmaajo ayaa u socdaali doono dalka Masar, oo uu ka helay casumaad rasmi ah dhigiisa dalkaas. Safarka madaxweynaha oo noqon doona kii 7-aad mudo sedex bilood gudahood ah ayaa waxaa ku wehlin doona masuuliyiin katirsan dowladda Soomaaliya. Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya sababta ka dambeysa in […]
WAR DEG DEG AH: Guddoonka baarlamaanka PL oo iskugu yeeray Guddiga Joogtada ah ee baarlamaanka hadda…
Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa shir gudoominaya kulan xasaasi ah oo ay yeelan doonaan goor dhaw xubnaha guddiga joogtada ah ee golaha Wakiilada Puntland. Warsidaha Puntlandtimes ayaa ogaaday in uu guddoomiyaha baarlamaanku guddiga horgeyn doono soo jeedinta Madaxtooyada Puntland ee ku aadan in la meelmariyo qodobka furitaanka golahan. Dood adag ayaa lafilayaa in […]
XOG XASAASI AH: Isimadda Puntland oo kulan ka yeelan doona Kordhinta baarlamaanka iyo Xogo banaanka u soo baxaya
GAROOWE(P-TIMES)- Maalmihii ugu dambeeyey si weyn ayaa mandiqada Puntland looga hadal hayaa qorshaha kordhinta baarlamaanka maamulkaas oo horey u ahaa 66 xubnood, balse hadda la doonayo in dibu eegis lagu sameeyo tiraddaas. Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa bishii April 2017 u soo gudbiyey Guddoonka baarlamaanka warqad faraysa in dibu eegid lagu sameeyo […]
DHAGEYSO: Madaxweynaha Soomaaliya oo goobo amnigooda shaki ku jirro booqanaya
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaka booqan doona goobo ay dadweynuhu iskugu yimaadaan oo ay ka mid yihiin garoonka Ciyaaraha ee KOONIS iyo Daljirka DAHSOON. Madaxweynaha ayaa ka qeybgalaya xuska markii la asaasay Kacdoonkii Gobo-nimo doonka Dhalinyaradda Soomaaliyeed ee SYL, oo laga xusayo gobalada Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa ubax dhigi doona goob […]
DHAGEYSI XASAASI AH: Xeer Ilaaliyaha DFS oo ku dhagan xubno faragalin ku haya Dhaqaalaha soo gala dawladda Soomaaliya
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Dahir ayaa sheegay in hey’adaha kala duwan ee dowladda ay u badan yihiin kuwo si qaldan u maamula dakhliyada soo gala, taasoo uu ku tilmaamay inay sharci darro tahay. Xeer Ilaaliyaha ayaa sheegay in hey’adaha dowladda looga baahan yahay in dakhliyada ay qabtaan ku shubaan Qasnada dowladda. […]
LA OGAADAY: Waa maxay Ujeedada loo dhisay Kudlad ka dhan ah Xukuumada RW Kheyre oo katirsan baarlamaanka Soomaaliya
Sidda ay heshay Puntlandtimes oo ay shalay baahisay Xildhibaano gaaraya 100 Xildhibaan ayaa isku raacay in ay abuuraan Kudlad ama koox gaar ah oo ay iskaga baheystaan baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya. Xildhibaanadan waxay kulamo kala duwan ku yeesheen magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaas oo ay hadda ka wadaan abaabul xoog leh oo ay ku […]